फोर्टुनियम मा 25 फ्रिडिन्स
बोनसको म्याद सकिन्छ: जुलाई 18, 2018
तपाईंलाई कहिले थाहा हुँदैन कहिले प्रेम आउँछ
तर तपाईंलाई थाहा छ जब यो फ्रिस्पेन समय हो!
यो निराश प्रेम र स्टीमिंग भावनाहरूले भरिएको कहानी हो। यो एउटा जेप्पेलिनको कथा हो जसको निर्माता, भिक्टोरिया डे पिनियनसँग प्रेम भयो। जब उनी आफ्नो पाels्गलमा तेल लगाईरहेकी थिइन, हाम्रो प्यारो स्यापेलिन सबै काँपिरहेकी थिइन, जब उनी बिस्तारै यसको गियरहरू छोईरहेकी थिइनन्। तर यो सबै समयमा ती दुबै पहिलो पटक प्रसारण नगरेसम्म यसको भावनाहरू बारे मौन थियो। त्यतिखेर जब जेपेलिन आफ्नो सम्पूर्ण उत्कटताका साथ निस्किन् कि उनी उनको लागि संसार छिन्, तर भिक्टोरियाले एउटा शब्द पनि बुझ्न सकिन। हामीलाई यहाँ दोभाषे चाहिन्छ! गरिब केटालाई आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् र छातीबाट सवारको उपस्थिति समात्नुहोस्:
फोर्टुनियम मा 25 फ्रिडिन्स अपडेट गरिएको: जुलाई 19, 2018 लेखक: Damon